ကက်(ရှ်)မီးယားဒေသတွင် ပါကစ္စတန် အမြောက်ကြီးများဖြင့် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ် - Yangon Media Group
ဆရီနာဂါ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅
အငြင်းပွား ကက်(ရှ်)မီးယားနယ်မြေ၌ အမြောက်များဖြင့် အ ပြန်အလှန်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်နေမှု ကြောင့် လူထောင်ပေါင်းများစွာတို့ နေအိမ်များစွန့်ခွာ၍ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြရသည်ဟု အိန္ဒိယပိုင်ကက်(ရှ်)မီးယား အရာရှိဖြစ် Imliaz Hussian က ဖေဖ်ာဝါ ရီ ၂၅ ရက်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ယင်းသည်နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်ထားသော ဒေသတွင်း နိုင်ငံကြီးနှစ်နိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ် တစ်ခုဖြစ်၏။ ယင်းပစ်ခတ်မှုသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မည်သူက စတင်၍မည့်သည့်အကြောင်းကြောင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားခြင်း မရှိချေ။ သို့သော်ယခုနှစ်အတွင်း ကက်(ရှ်)မီးယားပစ်ခတ်မှုကြောင့် အိန္ဒိယစစ်သားခြောက်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး နောက်လတ်တလောတင်းမာမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ပါကစ္စတန်ဘက်မှအမြောက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကက်(ရှ်)မီးယာ့း မငဒေသရှိအရပ်သား နေအိမ်များပေါ်သို့ ထိမှန်ကာစစ်သားများစွာ ထွက်ပြေးနေကြရသည်။ အိန္ဒိယတပ်သားများကလည်း ပါကစ္စတန်ဘက်သို့ အမြောက်များဖြင့် ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း၊ အငြင်းပွားဒေသအ တွင်း အပြင်းအထန်ဆုံးသော ပစ်ခတ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ နှစ်ဖက်စစ်တပ်များသည် အမြောက်ကြီးများဖြင့်သာမက လက်နက်ငယ်များ မော်တာများသုံး၍လည်း ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ Uri ဒေသတွင်အမြောက်ဒဏ်ကြောင့် လူ ၇ဝဝ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရသည်။ ကက်(ရှ်)မီးယားဒေသအား နှစ်နိုင်ငံစလုံးကပင် မိမိတို့ပိုင်နယ် မြေများအဖြစ် တောင်းဆိုထားကာ မကြာခဏအပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့နေကြသည်။
ကချင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးနှင့် ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦးကို လာမည့် အရေးပေါ်ညီလာခံတွင် UNFC အဖွဲ့??
ရှီကျင့်ဖျင် သမ္မတတာဝန် အကန့်အသတ်မရှိ ဆက်လက် ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်မည်
” Vent လုပ်လို့ ကိုယ့်ကို မုန်းသွားမယ်။ မင်းသမီးလုပ်လို့ ကိုယ့်ကို ချစ်သွားမယ်ဆိုရင် ကိုယ်အော?
ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် အတွင်း ဒီချုပ်မဲဆွယ်ရာ၌ အနုပညာရှင်များလည်း ပါဝင်မည်
အိုင်ယာလန်ကို လျှော့မတွက်ရန် ဒိန်းမတ်ကို ပီတာရှမိုက်ကယ် သတိပေး